किन सुन्निन्छ खुट्टा ?
मुख्य पृष्ठHealth Tips स्वास्थ्यकिन सुन्निन्छ खुट्टा ?
सामान्यतया मोटोपना भएका व्यक्तिहरुले दैनिक धेरै समय उभिनएर काम गरे खुट्टा सुन्निन सक्छ । अनी एकै स्थानमा धेरै बेर बसिरहँदा विशेषगरी सवारीचालक र गार्ड रुपमा काम गर्नेहरुलाई पनि खुट्टा सुन्निने समस्या हुन सक्छ ।
यस्तै गर्भावस्थाको समयमा खुट्टा सुन्निनु पनि सामान्य प्रकृया भित्रै लिन सकिन्छ । उच्च रक्तचाप भएका ब्यक्तिहरुलाई पनि यो समस्या हुन्छ । तर खुट्टा सुन्निने समस्या कहिलेकाँही सामान्य नहुन पनि सक्छ ।
ठुला र जटिल मानिएका रोगहरु मुटुसम्बन्धी समस्या ( मुटु कमजोर भएमा, उच्च रक्तचाप भएको बेला र भल्बको रोग भएमा)। फोक्सोसम्बन्धी रोग ( दम भएमा), मिर्गौलासम्बन्धी रोग लागेकाहरुको खुट्टा सुन्निने गर्छ ।
यस्तै तपाईको खुट्टा सुन्निने अर्काे कारण भने थाइराइडको कमी भएमा, रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने अन्य औषधिको प्रयोग पनि हुन सक्छ । कहिलेकाँही मात्रै यो ममस्या देखियो भने सामान्य मान्न सकिन्छ तर सधै यस्तो हुन्छ भने तपाईले एक पटक चिकित्सकको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ ।